QORMOOYINKA – Page 4 – War La Helaa Talo La Helaa
Home » QORMOOYINKA (page 4)
Sucuudiga Iyo Xulufadiisa Oo Bilaaway Qaab Cusub Oo Soomaaliya Loo Curyaamin Karo
Jiinoow 20/08/2017	819 Views
dawladda Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa bilaabay qorshe cusub oo ay ku curyaaminayaan dawladda Soomaaliya. qorshahan ayaa ah in si gooni gooni ah loola kulmo madaxda maamul goboleyd yada dalka ka jira si ay xiriirka ugu jaraan una beeniyaan goaankii DFS ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka. Dhawaan ayeey ahayd markii uu madaxwaynaha Puntland Cabdi weli gaas uu xiriirka u jaray Qatar, ...
Jiinoow 19/08/2017	432 Views
Khatarta argagixiso ee soo wajahaysa dalka UK ayaa sare u sii kacday xilli kooxda isku magacaawday dowladda Islamka ay gacantooda ka baxayso dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya. Sida uu sheegay wasiirka amniga Ingriiska Khatarta argagixiso ee UK uga imanayasa kooxda IS ayaa ah mid korodhay. Ben Wallace ayaa sheegay in kooxaha xagjirka ah ay isku dayayaan ...
Jiinoow 19/08/2017	509 Views
Nin mindi sita ayaa 7 qof ku dhaawacay weerar ka dhacay magaalada Surgut, ee ku taalla dalka Ruushka sida ay sheegeen ila wareedyo laamaha ammaanka dalkaasi. Ninkani oo mindida la dhacay dad marayay wadooyiinka ayaa markii danbe waxaa toogtay booliiska . Dadkii ku dhaawacmay weerarkan ayaa waxaa loola cararay isbataal ,laba ka mid ah ayaa qaba dhaawacyo halis ah,sida ay ...
Jiinoow 19/08/2017	453 Views
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Tayib Erdogan, ayaa ku tilmaamay hogaanka Jarmalka mid “cadow” ku ah dalkiisa, asagoo ugu baaqay dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee haysta dhalashada Jarmalka in aanay u codeyn isbahaysiga hadda u taliya dalkaasi. Doorashada guud ee Jarmalka ayaa dhici doonta 24-ka September ee sanadkan, waxaana codkooda ka dhiiban doona ku dhawaad milyan qof oo Jarmal ...
Jiinoow 19/08/2017	350 Views
Alshabaab ayaa soo saaray magacyada iyo liiska dadkii ku dhintay goobtii ay ka dhacday duqeynta ay ciidanka Mareykan ka u geysteen Qoyskii Soomaaliyeed. Tuullada Axmed Yare ee duleedka Jilib ayeey ka dhacday xusuuq Banii Aadamnimo oo loo geystay xer iyo qoysas masaakiin ah oo ay diyaarado duqeeyeen. Haddaba Alshabaab warbaahintooda ayaa soo bandhigay magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaas. 1-Sheykh Maxamed ...
Jiinoow 19/08/2017	492 Views
Booliska magaalada Turku ee Koonfur Galbeed dalka Finland ayaa toogtay nin ay sheegeen in uu dad ku tooreeyay magaaladaas. Inta la og yahay laba qofood ayaa u dhimatay weerarkaas tooreyda loo adeegsaday, halka lix kalana ay ku dhaawacmeen sida ay Booliska ay warbaahinta u xaqiijiyeen. Ninka ayaa toorey lasoo baxay, kaddibna geliyay dhawr qofood oo u dhaweyd, taas oo keentay ...
Jiinoow 19/08/2017	217 Views
Erayga ”suufi” af ahaan macnihiisa dhabta ah haba yaraatee la isku ma raacsana. Dad baa yidhi waa magac laga soo qaatay marada suufka ah oo ay niman Alle ka cabsi badani xidhan jireen. Dad kale waxa ay yidhaahdeen waxaa laga wadaa qofka suufiga ah oo ay qalbigiisa iyo qofnimadiisa oo dhami sida suufka nadiif yihiin oo debecsan yihiin. Dad kale ...
Haddaanan is qirin, qiyaali baan ku noolaaneynaa. W.Q. Xasan Yuusuf Leego
cuu te 18/08/2017	50 Views
Haddaanan is qirin, qiyaali baan ku noolaaneynaa. Xorriyadda_Roobow iyo Xarigga _Xasan Daahir. Dhowr ka mid ah asxaabtayda, xigto ahaan markaa iila soo xariiray, ayaa i weyddiiyey “Sababta aanan waligey ka ga hadlin xarigga Xasan Daahir, laakiin aan Roobow u soo dhaweeyay?” Waxaan rabaa inaan jawaab waafi ah ka siiyo dadkaas weyddiintooda, bulshada kale iyo saaxiibbadeyduna ogaadaan, waxa aan ka qabo xarigga Xasan Daahir ...
Donald Trump, 100-sano Oo Soo Socotana Ma Gaari Doono Obama Qoraalkan Bes Haddii Lagu Qiimeeyo!(Sheeko Cajiib Ah)
Jiinoow 17/08/2017	889 Views
“Dadku waa in ay bartaan naceybka,haddii ay baran karaan naceybka, waxaa la bari karaa in ay wax jeclaadaan ,Dabiiciyan in qofka wax jeclaado ayaa ka asalsan in uu wax naco. Waxaa laga yaabaa in Twitter-ku yahay barta uu madaxweyne Trump ugu jecel yahay marka uu doonayo in uu fariin gudbiyo, laakiin fariin uu bartaas ku qoray madaxweynihii hore ee Maraykanka ...
Maxay Sidan Ugu Burburtay Magaalada Awaamiya Ee Dalka Sacuudiga?
Jiinoow 17/08/2017	622 Views
Wariye ka tirsan BBC-da oo lagu magacaabo Sally Nabil ayaa loo ogolaaday in uu tago magaalada ku taala bariga Sucuudiga ee Awaamiya, halkaasi oo ay billooyinkii ugu dambeeyey ka dhacayeen rabshado iyo dagaalo u dhaxeeya ciidamada Sucuudiga iyo kooxo shiico ah oo halkaasi ku sugan. “Waxaad haysataa daqiiqado kooban oo aad dhulka taagnaan kartid, markii aan ku dhahno ‘dhaqaaq’, waa ...